हिरासतमा के सिके भिटेनले ? - Postmandu
हिरासतमा के सिके भिटेनले ?
2019-11-08 2019-11-11 PostmanduLeaveaComment on हिरासतमा के सिके भिटेनले ?
काठमाडौं । हामी यस्तै तहो नि ब्रो गीतकाकारण चर्चा अनि विवादमा आएका नेपाली हिपहप स्टार समीर घिसिङ भीटेन नेपाली हिपहपलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन चाहन्छन् । उद्यपि उनी यसै गीतका कारण पक्राउ समेत परे भाने उक्त गीत युट्युबबाट हटाउन बाध्य भए ।
अहिले उनी पुनः आफूलाई परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । आफ्नो २४ घण्टे गिरफ्तारीपछि सार्वजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका भीटेनले शुक्रबार साप्ताहिकसँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको केही अंशः
कसरी पक्राउ पर्नुभयो रु प्रहरी हिरासतको अनुभव सुनाउनु न ?
म स्टुडियोमा थिएँ । त्यतिबेला थाहा दिएनन् झ्याप्प आए । रेकर्डिङका लागि रेडीहुँदै थिउँ । झम्सीखेलस्थित आफ्नै रेकर्डिङ स्टुडियोमा । पक्राउपछि २४ घण्टाभन्दा बढी हिरासतमा बसेँ होला । तनावै तनाव भयो प्लानिङहरु थिए । धेरै कुरा सोचिरहेको थिएँ । तिहारको मुखमा एक्कासी पक्राउ पर्दा टेन्सन भइरहेको थियो । पक्राउ परेपछि धेरै कुरा सोच्दा सोच्दै समय बित्यो ।
त्यो २४ घण्टाले तपाइँलाई के सिकयो ?
धेरै कुरा आफूले सोचेर पनि सिकें । यताउता सोधपुछ गरेँ । त्यहाँ भएका मानिसलाई के कसरी आएको हो भनेर सोधें, कोही आफूले हाँकेको गाडीले मान्छे किचेर आएका थिए । कसैले झगडा गरेर आएको भने, एक अर्कासँग कुरा सेयरिङ भयो । त्यहाँ कसैले यस्तो गीत गाउनुहुन्न भनेनन् । सबैले राम्रो कुरा गरे । गल्ती त हुन्छ मानिसबाट तर राम्रा खालका मानिस नै थिए त्यहाँ । जानी जानी होइन झुक्किएर गल्ती गर्नेहरु थिए । हिरासतमा रहेका सबैले राम्रो कुरा गरे । मलाई थाहा नभएका कुरा हरु सिकाए । मैले उनीहरुको कुरा सुनें । मेरो कुराहरु पनि सुने, उनीहरुले । एक अर्कामा कनेक्सन भयो । थुनुवाहरुसँग फिलिङ सेयर भयो । पोजेटिभ कुरा गरें । पोेजटिभ कुरा सिकें ।
यो अनुभवबाट नयाँ गीत जन्मने सम्भावना छ ?
अवश्य छ, हिरासतमा बस्दाको अनुभवबाट नयाँ गीत मज्जाले जन्मन्छ । त्यहाँ मैले दुःख पनि देखें । कति तनावमा थिए । यद्यपी दुःख गर्दा पनि हाँसेर बसिरेहका थिए । म त टेन्सनमै थिएँ । सुरुको दिन सबैलाई त्यस्तै हुँदो रहेछ । म त हाँस्न पनि सकिरहेको थिइन । उनीहरु हाँसिरहेकै थिए । उनीहरुले पनि सहानुभुति दिए, सबै कुरा ठिक हुन्छ भाइ भने । उनीहरुलाई हेर्दा आफूलाई छुट्टै खालको पोजेटिभ फिल आउने रहेछ । उनीहरु हाँसिरहेको, जिस्किरहेको देख्दा आफ्नो टेन्सन पनि दूर भयो । यद्यपि भोलि के गर्ने भनेर सम्झँदै बसेँ । प्लानिङ बनाएँ अब यसो–यसो गर्छु भनेर । नयाँ नयाँ आइडिया निकालेँ । म यसरी मुभ हुन्छु भनेर निर्णय लिएँ । समग्रमा फाइदा भएको छ मलाई । यातना आदि केही पनि भएन ।
राम बोस अमेरिका र ब्राजिलमा सम्मानित
अब कारागारमै यौनसम्पर्क : प्रजनन सुख, ६० दिन बिदा पनि
बलिउड सुन्दरी दिशा पटानीका बोल्ड तस्विरहरु हेर्नुहोस्
2019-04-28 2019-04-29 Postmandu
दीपशीखाले किन गरिन् कपाल मुण्डन ?
2018-05-08 2018-05-08 Postmandu
दीपक-दीपाको नयाँ फिल्म: ‘छ’बाटै जुर्यो यस्तो नाम
2019-04-09 2019-04-09 Postmandu